Real Estate Listings: » Residential homes » Flats » GB » West Midlands » Birmingham » Hall Green » Ifulethi elingu-1 lokuqasha eBirmingham, eNtshonalanga Midlands1
United Kingdom, West Midlands, Birmingham, Hall Green, B28 8dy
Ukuvuselelwa kokugcina 2020-11-24
Ikhodi Yokuposa: B28 8dy
Izici: Ground Floor Flat, Furnished/Unfurnished, Modern Kitchen & Shower Room, One Bedroom, Open Plan Lounge/Kitchen, Available now!
Ifulethi elingaphansi elizimele elisezindaweni zokuhlala ezidumile zaseHall Green. Impahla ebanzi inikezwa ifenisha / ingenafenisha futhi iqukethe: Indawo yokuphumula / indawo yokudlela evulekile neplani evulekile yekhishi lesimanje elinemishini, indawo esetshenziswayo, igumbi lokulala kabili negumbi leshawa lwanamuhla. Iyatholakala manje! Uxolo, azikho izilwane ezifuywayo noma ababhemayo.
, B28 8dy
Izikole eziseduzane B28 8dy